गाउँपालिका अध्यक्ष नै सुन तस्करीका नाइके ! - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, भदौ २७ । भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल भदौ २० मा एक्कासि बिदामा बसे ।
याे पनि पढ्नुस ४० तोला सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट उपसचिव समातिए
याे पनि पढ्नुस ‘सशस्त्रकै मिलेमतोमा’ ८८ केजी सुन तस्करी ! यसरी तथ्य बाहिरियाे ..
पौडेल अहिले भारतमा रहेको ब्युरोको निष्कर्ष छ । ब्युरो प्रमुख डिआइजी पुष्कर कार्कीले सुन तस्करीमा संगठित जालो सक्रिय रहेको पाइएको र तस्करको पहिचान र पक्राउका लागि अनुसन्धान जारी रहेको बताए । –नागरिक दैनिकबाट